I-FAQ hose series FAQ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Yimuphi usayizi we-PVC okufanelekayo engiwudingayo?
Into ebaluleke kakhulu lapho usebenza ne- Ipayipi le-PVC futhi nokufakwa kungokuqokwa usayizi. A 1 " kufaneleka izolingana no-1 " ipayipi, noma ngabe eyodwa ishejuli 40 noma 80.
Ingabe kulungile ukusebenzisa ipayipi le-PVC ukuthola amanzi ashisayo?
Ukwehluleka okuyinhloko kwe Ipayipi le-PVC iqiniso ukuthi akunakuba njalo esetshenzisiwe nge amanzi ashisayo izinhlelo zokusebenza. Lapho uvezwa ku amanzi ashisayo, I-PVC izosuka.
Ingabe i-PVC hose iyaguquguquka?
Lapho iningi labantu licabanga ngalo I-PVC, bacabanga ngamapayipi aqinile amhlophe nampunga abawasebenzisayo ezinhlelweni zabo zamapayipi amanzi. Noma kunjalo I-PVC kuyinto eguquguqukayo impela, futhi kungaba njalo nezimo kanye nokuqina. Lobu ubude be- ipayipi eliguquguqukayo le-PVC kungakunika ukuguquguquka kwemigqa lapho imigqa eqinile ingeke iye khona.
Ingabe i-PVC hose fuel resistant?
Can I-PVC namanye amapulasitiki amapayipi isetshenziselwe okokubasa kanye igesi? Ngamafuphi, impendulo ithi cha, abakwazi. ... Ngenxa yesimo se I-PVC kanye namanye amapulasitiki, awafanelekile ukusebenzisela wona uphethiloli noma uphalafini. I-PVC kanye namanye amapulasitiki akhubazeka kalula ezindaweni ezinokushisa okuphezulu, futhi angavuza noma aqhekeke
Ingabe umuhlwa udla i-PVC eguquguqukayo?
Ayikwazi ukumelana nezinambuzane, ikakhulukazi, umuhlwa kwaziwa udle it. Ucwaningo luye lwabonisa i-PVC eguquguqukayo iyakwenza hhayi ukuheha umuhlwa, noma kunjalo uma i-pvc eguquguqukayo ibekwe phakathi kwe- umuhlwa isidleke nomthombo wokudla, bangazama ukukwenza udle indlela yabo ngayo